सधैं स्वस्थ रहन चाहनुहुन्छ ? यी उपाय अपनाउनुस्:: Naya Nepal
सधैं स्वस्थ रहन चाहनुहुन्छ ? यी उपाय अपनाउनुस्
काठमाडौँ । स्वस्थ आहार आफ्नो स्वास्थ्य राम्रो बनाउने चाहना जोकोहीलाई हुन्छ। स्वस्थ शरीरको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा स्वस्थ आहार हो। आजको व्यस्त र तनावपूर्ण जीवनशैलीमा तल दिइएका खानेकुरा खाँदा आफ्नो शरीरलाई निरोगी र स्वस्थ बनाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ।
काठमाडौँ । मानिस शरीरका विभिन्न भागमा ‘मुसा’ आएर हैरान भएका हुन्छन् । त्यसलाई रोक्न वा हटाउन नसक्दा उनीहरूको सुन्दरतामै असर परिरहेको हुन्छ । विभिन्न औषधि गर्दा पनि यसबाट छुटकारा पाउन नसक्दा मानिसलाई तनाव भइरहेको हुन्छ ।